Ma kala furteen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin? | KEYDMEDIA ENGLISH
Ma kala furteen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin?
Shaqsiyaad u dhuunduleela xogaha hoose ee Madaxtooyada, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in Farmaajo rumeysan yahay in Fahad u soo jeediyay sumcad xumo sababtay in guud ahaan shacabka Soomaaliyed nacaan, hab-maamulkiisa qaldan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo markii Guddiga Doorashooyinka heer Federaal, diideen ansixinta natiijada doorashadii boobka ahayd ee Fahad Yaasiin, Baladweyne kaga soo qatay kursiga HOP086, ayay soo baxayeen warar sheegaya in Fahad iyo Farmaajo labo waddo kala qaadeen, sabab la xariirta cago-jiid dhanka Farmaajo ka yimid.
Xaafiiska Madaxweynihii hore, ayaa diiday inuu waqti galiyo kusiga Fahad loo diiday, sidoo kale, Farmaajo, wuxuu dhagaha ka fureystay codsi kaga yimid dhanka Fahad oo ahaa inuu cadaadis ku saaro Madaxweynaha Koofur galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, inuu isku xiro xalka kuraastii la xayiray, si ay u fududaato howsha kursiga HOP086.
Sidoo kale, Madaxweynihii hore wuxuu ka gaabsaday inuu saaxiibtinimada kala dhaxeysa, Guddoomiyaha Maxakamadda Sare, Baashe Y. Axmed, kaga faa’iideysto in Maxakamaddu ka gar-naqdo dacwada Fahad ka gudbiyay Guddiga FEIT, kursigana u xukmiyo eedeysanaha hadba darbi madaxa ku garaacaya, si doodda kursiga u yeelato waji cusub.
Warbixinno hore, waxa ay sheegeen in Farmaajo uu Fahad ka codsaday inuu ka baaqsado u tartanka xilka Guddoomiye ku gigeynka Golaha Shacabka, maadaama haddii Fahad tartanka guuldarro kala kulmo, ay ka dhigan tahay, in uusan jiri doonin Xildhibaan codkiisa ku qasaarinaya Farmaajo, lana ogaanayo codadka ay heystaan Kooxdan.
Fahad ayaa codsigaas ka dhago adeegay, wuxuuna ku dooday in ay lama huraan tahay inuu ka mid noqodo Guddoonka Golaha Shacabka, waana sababta ugu weyn ee keentay in Farmaajo curyaamiyo dadaallada Fahad ku doonayay in waxba kama jiraan laga soo qaado go’aanka uu Guddiga Doorashooyinka FEIT, ku hor istaagay HOP086.
Kadib markii uu soo baxay shalay go’aankii lama filaanka ahaa ee Maxakamadda sare, ayuu sare u sii kacay, warka sheegaya inuu jiro madmadow xooggan, oo ka dhashay in Farmaajo, ka caga-jiiday dhowr waddo oo lagu fududeyn lahaa macquul ahaansiyaha uu Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin ku heli karo kusri Baarlamaan.
Ilaa hadda inta qof ee ka hadashay arrinka kursigaan ee taageerada u muujiyay Fahad, ayaa ah shaqsiyaad si gaar ah isaga ugu daaban, sida Madaxweyne Ku xigeynka Hirshabeelle, Yuusuf Axmed Hagar, xubno ku jira Guddiga Doorashooyinka labada heer iyo shaqsiyad baraha bulshada isaga ku amaana oo Khadiijo Diiriye ugu horreeyso.
Lacag Fahad Yaasiin ka soo qaaday Dowladda Qatar, ayaa Maxamed Farmaajo ka dhigtay Madaxweynaha Soomaaliya horraantii 2017, sidoo kale, Fahad ayaa ahaa amiirka daaha gadaashiisa ka maamulayay dalka shanti sano ee la soo dhaafay, wuxuuna inta badan lahaa go’aannada siyaasadeed ee ugu danbeeya, hadda-se waa waqtigii kala tagga.
Shaqsiyaad u dhuunduleela xogaha hoose ee Madaxtooyada, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in Farmaajo rumeysan yahay in Fahad u soo jeediyay sumcad xumo sababtay in guud ahaan shacabka Soomaaliyed nacaan, isla-markaana aysan jirin rajo uu dib ugu laaban karo xaafiiska xitaa haddii uu helo cododka saraakiisa NISA, ee Fahad ku daaban.
Farmaajo, ayaa doonaya inuu tijaabiyo noloshiisa siyaasadeed, la’aanta Fahad Yaasiin, kaasoo qudhiisa la sheegayo inuu dhisi doono mid ka mid ah musharixiinta ka imaanaya dhanka Golaha Midowga Musharixiinta, haddii uusan la kulmin xukun maxakameed ka hor u dareeridda doorashada kursiga ugu sarreeya dalka [Madaxweynaha Soomaaliya].